Saynis – Page 2 – Kaasho Maanka
Maxaa ka dhaxeeya amminta (waqtiga) iyo cuf-is-jiidka?
Sida uu ku muujiyay Albert Einstein Aragtidiisii Nisbiga (The Theory of Relativity), cuf-is-jiidka uma uusan qeexin hab xaddi xoog fool leh (vector) oo kali ahe, waxa uu sidoo kale u muujiyay sidii in sagxaddu (space-ka) tahay mid ka kooban derin cinjir ah oo daacaysa haddii walax cuf culus lihi fuulaan. Sawiro sidii in adiga aqristaha ahi iyo qof kale aad labada dacal ka qabataan maro, deetana...
Waxaa jira laba saynisyahan oo aan caan ku ahayn aragtiyihii saynis ee ay soo bandhigeen, inta badan na aragtiyahaas saynisyahano kale loo tiriyo. Labadan saynisyahan waxaa ay kala yihiin, Aristarchus of Samos (dh. 230 BC), iyo saynisyahan Ingiriis ahaa oo la odhan jiray John Michell (dh. Abriil 1793). Aristarchus waxa uu ahaa inta laga warqabo shaqsigii ugu horeeyay ee soo bandhigay aragtida ah...
Boggii Hore 1 2 3 4 Bogga Xiga